Pogba oo ka warbixiyay in talo muhiim ah ee ku aadan Jose Mourinho uu ka helay Didier Deschamps – Gool FM
Pogba oo ka warbixiyay in talo muhiim ah ee ku aadan Jose Mourinho uu ka helay Didier Deschamps
(Manchester) 24 Juunyo 2018. Xidiga khadka dhexe kooxda Manchester United iyo xulka qaranka France Paul Pogba ayaa ka warbixiyay, doorka uu ku leeyahay Deschamps khilaafka kala dhexeeya Jose Mourinho.
Paul Pogba ayaa shir jaraa’id kaga soo muuqday maanta xerada tababarka xulka qaranka Frace wuxuuna kaga warbixiyay khilaafka isaga iyo Jose Mourinho.
“Dechamp wuxuu iga codsaday inaan aamusnaado, wuxuuna ii sheegay inuu ku kalsoon yahay awoodeyda, marwalba wuxuu Iga difaacaa dhanka warbaahinta”.
“Dechamp wuxuu xiriir adag la leeyahay dhamaan ciyaartoyda, si fiican ayuu inoo fahmayaa”.
“Lacagta iyo wararka ku aadan in aan Manchester United ku imid 100 million, waa mid aysan joojin doonin ka hadalkiisa saxaafada, waxaana xaqiijinayaa in ay tahay talaabo badashay nolosheyda”.
Si kasta waxaa xusid mudan in xiriirka ka dhexeeya Paul Pogba iyo Jose Mourinho.uusan wanaagsaneen taasoo ay in badan ka hadashay saxaafada, waxaana xidiga xiliyadii lasoo dhaafay lala xiriirinayay inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Old Trafford.
Maurizio Sarri oo ku wajahan London si uu u badalo Conte (Goorma?)
Juventus oo 48-saac gudahood dhamaystiraysa saxiixa Joao Cancelo